सत्र हजार मानिस मार्ने योजनाकार डा. भट्टराईलाई अमेरीकामा कालो झण्डा देखाउनु कम भयोः पत्रकार रामप्रसाद खनाल (भिडियाे सहित) | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सत्र हजार मानिस मार्ने योजनाकार डा. भट्टराईलाई अमेरीकामा कालो झण्डा देखाउनु कम भयोः पत्रकार रामप्रसाद खनाल (भिडियाे सहित)
नेपालमै फर्कर्ने तयारीमा रहेकाे खनालकाे दावी
प्रकाशित मिति १३ कार्तिक २०७५, मंगलवार १६:५६ लेखक नेपाली जनता
रामप्रसाद खनाल नाम सुन्ने जो कोहिले पनि नेपाल टेलिभिजनमा दोहोरी कार्यक्रम संचालक भनेर चिनिहाल्ने नाम हो । यतिले मात्र उहाँको परिचय सकिदैन उहाँ एक पत्रकार, लेखक, साहित्यकार र कलाकार पनि हो । नेपालमा रहदा होस वा अमेरीकामा रहेर प्रवासी जीवन विताउदा होस, उहाँ हरपल नेपाली साहित्य, नेपाली कलाकारीता र पत्रकारीतालाई एकै साथ लिएर हिड्ने एक सर्जक हुनुहुन्छ । उहाँ राजनितिक कारणले अमेरीकामा सपरिवार वसोवास गर्दै आउनु भएको छ । उहाँले नै अमेरीकामा नेपालीहरुले नेपालीचाडवाड धुमधामसँग मनाउन सुरुवात गराउने मानिस पनि हो । यस्ता बहुप्रतिभाशालि व्यतित्वसँग नेपालीजनता अनलाइनले गरेको भेटवार्ता ।
तपाई लामोसमयदेखि अमेरीका बस्दै आउनु भएको छ । तपाईको नजरमा नेपालको राजनिति र पत्रकारीतालाई कसरी निर्याल्नु भएको छ ।
म नेपालमा रहेर होस वा अमेरीकामा रहदाँहोस म नेपाली राजनीति र पत्रकारीतालाई माया गर्ने मानिस हो ।
अहिले नेपालको राजनितिले ठूलो फड्को मारेको छ । तर, राजनितिक रुपमा केहि परिवर्तन भएको छ । मुलकको राजनिति लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्रमा गएको छ । मुलकमा जुन तन्त्र आएको भएपनि नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र विकासको रुपान्तरण भएको देखिएन । नेपाली जनताको अवस्था झन विकराल देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारले मुलक आक्रान्त भएको देखिन्छ । दुइतिहाइ बहुमतको सरकार भएपनि सुशासनको अनुभुति नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन ।
काठमाडौंदेखि नवलपरासीसम्मलाई मैले नजिकबाट नियाल्न पाए । यसमा मुलक त कंक्रीटको विशाल पहाड बनेको अनुभुति भयो मलाई । ठुला भवन निर्माण त भएछन तर, विना योजना आफुखुसी यसरी बनेका भौतिक संरचनाले भोलि कतै मानवको विनासको कारक त यो बन्दैन भन्ने लागेको छ ।
तपाईले विकास भएन भन्नेर भन्नु भयो तर, प्रवासी नेपालीहरुले नेपालको विकासलाई आलोचना मात्र गर्नु हुन्छ । विकासमा सहभागिता देखाउदैनन भन्ने आरोप तपाईहरुमा छन नि ?
सत्य हो । एनआरएनहरुलाई यो आरोप लागेको हो । हामि एनआरएन हौं । त्यतिमात्र हैन विदेशमा बस्ने नेपालका बारेमा ठुला कुरा गर्ने भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यति भन्दै गर्दा के कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ भने, कुनै पनि नेपाली रहरले विदेश गएको हुर्दैन । नेपालमा कुनै पनि जनशक्ति टिक्ने अवस्था छ त ? रोजगारीको पुर्ण ग्यारेङटी यहाँ छ त, छैन नि ? यस्तो अवस्था छ नेपालको विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जीनियर, कलाकार, पत्रकार र कर्मचारी समेत जागिर छोडेर वाहिर गएको छ । युवा जनशक्ति गाउँमा छैन । नेपालमा बुढाबुढी, विरामि मानिसहरुमा गाउमा छन । मानिस विरामि भए भने अस्पतालसम्म लैजाने अवस्था छैन । घरमा कसैको निधन भएमा लास उठाउन समेत मानिसहरु छैन । यस्तो अवस्था छ ।
यसको मुख्य जड को ? एनआरएनको रेमिट्यास खाएर शासन शक्तामा बस्नेहरुले राम्रो काम गरिदिएको भए आज लाखौ नेपाली जनशक्ति एनआरएन बन्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
रामप्रसाद खनाल नेपालमा नै सबै खाने हैसियत बनाएको मान्छे किन अमेरीकामा गएको भन्ने प्रश्न पनि उड्ने गरेका छन नि ?
त्यस समयमा अर्कै अवस्था थियो । मेरो र मेरो परिवारको जीउ ज्यानको पनि समस्याले मलाई अमेरीकामा वस्न बाध्य भएको हुँ ।
तपाई अमेरीकामा बसेर पनि नेपाल र नेपाली प्रति निक्कै लगाव देखिएको छ । अमेरीकामा बसेर पनि सामाजिक काममा निक्कै जम्मनु भएको छ नि ? यो कसरी मिलाउनु भएको छ ?
म अमेरीका बसेको १२ वर्ष भयो । तर,मैले अमेरीकामा बसेर धेरै गीत र साहित्य रचना गरेको छु । नेपाल सम्बन्धी मेरो मन र पन सामाजिक संजालमा पोखिएको हो ।
पुरा अन्तरर्वाताकाे हेर्न youtube : nepalijanta मा पनि हेर्न सक्नु हुन्छ ।
गगनको योजना यसरी फेल खायो, किन कांग्रेस प्रबेश गरेनन् सांसद तामाङ ?
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालका सांसद रखुवाका प्रेम तामाङ सोमबार नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्ने निकै चर्चा थियो । एक…
वि.सं.२०७६ साल वैशाख ०५ गते । बिहिबार । ईश्वी सन् २०१९ अप्रिल १८ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ ।…
आज कृष्ण औँसी घोडेजात्रा विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा शनिबार विविध…
बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा १४ वर्ष कैद
स्याङ्जा । एक १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले १४ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ ।…
काठमाडौँ । ‘मेलम्चीको पानी कहिले आउला ?’ दशकौं देखिको जिज्ञास हो यो । सरकार बेलाबेलामा यसको मिति सार्वजनिक गर्छ…
एउटै निर्णयले दर्जनौं उच्च पदस्थलाइ झड्का
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिहरु खारेज गरेको छन्।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्…